Yaa ka dambeeyay Qaraxa Muqdisho? [Sawirro] | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Al-Shabaab ayaa sheegatay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee Maanta ka dhacay magaaladda Muqdisho, kaasoo lala damacsanaa in lagu dilo taliyaha booliska gobolka Banaadir Col Farxaan Qaroole.
War kasoo baxay Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu sheegay inay weerarka ku dhinteen 4 askari, islamarkaana ay ku dhaawaceen 5 kale, kuwaasoo kamid ahaa ilaalada amaanka taliye Farxaan Qaroole.
Farxaan Qaroole ayaa la sheegay in uu ka badbaaday qaraxa, maadaama uu ku jiray gaari nooca aan xabada karin [Bullet-proof], wuxuuna xiliga la qarxinayay uu kamid Villa Baydhabo, oo shir uga soo qeybgalay.
Qaraxa ayaa sababay dhimashada dhowr qof oo shacab ah, oo jidka marayay, waxaana ku burburay goobo badan oo ganacsi, iyadoo muuqaalka goobta isku bedelay meel burbursan.